Shirka Kismaayo oo la isku af garan waayey, lana sheegay inuu soo xirmay. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Shirka Kismaayo oo la isku af garan waayey, lana sheegay inuu soo xirmay.
Madaxda Dowladda Federalka iyo kuwa Dowlad-gobaleedyadda waxay ilaa iyo saqdii dhexe ee xalay lahaayeen La-tashiyo ku aadan Nidaamka Doorashooyinka iyo Awood-qeybsiga.
Siyaasiyiin ka mid ah Xubnihii ka qeyb galay Shirkaasi ayaa inoo sheegay in lagu kala qeybsamay Nidaamka la qaaadan lahaa, iyadoo Madaxweynaha Maamul-gobaleedka K/Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku adkeystay in Nidaamka 4.5 lagu soo xulo Aqalka Hoose iyo Aqaalka Sare ee Barlamaanka soo socda.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, C/weli Gaas iyo Axmed Madoobe waxay iyagana ku adkeysteen in Nidaamka Xulashadda Labada Aqal ee Barlamaanka soo socda iyo Awood-qeybsiga lagu saleeyo Nidaamka Deegaanka.
Madaxweynaha Galmudug, C/kariim Xuseen Guuleed waa uu ka gaabsaday Muranka la xiriira Nidaamka Awood-qeybsiga.
Wararka ugu dambeeyey ee saakayto naga soo gaarayo Kismaayo ayaa sheegay in Fadhigii xalay lagu kacay micnaheedu tahay inuu sidaas ku xirmay Shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka ee dorraad ka furmay magaalladda Kismaayo.
Dhinaca kale, waxaa suurtogal ah inay Madaxda maanta yeeshaan Kulamo kale oo La-tashi ah, si meel dhexe la isugu yimaado Khilaafka ka taagan Nidaamka loo qabanayo Doorashooyinka soo socda.
Wixii ku soo kordha Shirkaasi waan idiin soo gudbin doonaa Insha Allaahu.
QM iyo Midowga Afrika oo cambaareeyey weerarkii ay Alshabaab shalay ku qaadeen Saldhig ay AMISOM ku leeyihiin Gobalka Gedo.